« prev 1 … 39 40 41 42 43 … 66 next »
Sagal Radio Services • Audio/News Report • July 7, 2019
Odayaasha Dhaqanka Cadaado oo diiday inay la kulmaan Ra’iisul Wasaare Kheyre
Sagal Radio Services • News Report • July 8, 2019
Odayaasha dhaqanka degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa la sheegay in ay diideen in ay la kulman Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo saaka gaaray magaalada Cadaado.
Muqdisho: Gaari ku qarxay isgoyska Digfeer
Gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay bar koontarool oo ku taal meel ku dhow isgoyska Digfeer ee magaalada Muqdisho,sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo safar dhulka ah ku tegey Gaalkacyo
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar dhulka uga soo baxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Xildhibaan Cosoble;”Waxaan maqalnay in dowlada tanaasul ka sameyneyso arrinta badda.”
Sagal Radio Services • News Report • July 11, 2019
Xildhibaan Cabdqaadir Cosoble Cali oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Federalka ayaa sheegay in uu jiro tuhun ah in dowlada federalka lagu cadaadinayo in ay tanaasul ka sameyso arrinta badda ee hortaal maxkamada caalamiga ah ee ICJ.
Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa beenisay inuu jiro kulan ay Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ku yeelanayaan 13ka bishan magaalada Addis Ababa.
Conversations With Council, 2020 Census Introduction
Producer • City of Clarkston • Audio • July 12, 2019